West Hollywood Los Angeles Gay Pride 2018
Mareykanka California Los Angeles
Ku dabaaldegida farxadda Gay ee ku nool West Hollywood
Taariikhda Gabdhaha Guurka ee LA
Los Angeles ayaa u dabaal-dagaysa Gay Pride horraantii Juun, si ay u sharaxaan waxa badan oo tixgelinaya inay yihiin mid ka mid ah dhacdooyinka ugu horreeya ee taariikhda gabadha dumarka iyo xuquuqda guurka: Riwaayadda Stonewall, oo dhacday June 28, 1969, oo ku taal barxada Manhattan ee Stonewall gay . Los Angeles Gay Pride waxaa la bilaabay sannad ka dib Stonewall, 1970, waxaana uu sii korayo tan iyo sanadkan oo ah sanadguuradii 46aad ee LA Pride.
Waxaa soo saaray Christopher Street West, dabaaldegga ayaa ka dhacaya aagagga ugu caansan ee loo yaqaan 'LA', oo ah magaalada West Hollywood . Sannadka 2018, dhacdooyinka waxaa la qaban doonaa dhammaadka usbuuca ee Juun 9-10.
LA Pride Preview
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan LA Pride ee 2018 ayaa halkan lagu soo dhejin doonaa iyada oo la heli karo. Waqtigan xaadirka ah, halkan waxaad ku arki doontaa dhacdooyinkii hore:
Bandhiga Farshaxanka ee LA Pride wuxuu dhacaa Sabtida iyo Axadda ee ku yaala bartamaha West Hollywood Park West Hollywood Park (dhinaca galbeedka San Vicente Boulevard oo udhaxeysa Santa Monica Boulevard iyo Melrose Avenue). Bandhigan, oo ah $ 25 maalintiiba (waxaad ka iibsan kartaa tiknoolajiyada bogga rasmiga ah ee Pride), wuxuu ka muuqdaa ku dhawaad ​​200 oo beesha iyo ganacsatada khaniisiinta ganacsiga, oo lagu daray waxyaabo badan oo madadaalo ah oo loogu talagalay marxalado kala duwan. Madaxda hore waxaa ka mid ah Aaron Carter, Brandy, Carly Rae Jepsen, Charli XCX, Krewella, Shamir, Hailee Steinfeld, iyo daraasiin kale oo ka mid ah ciyaartoyda.
Xilliga Jimcaha ee Los Angeles Gay Pride Parade wuxuu dhacayaa Axadda, 11ka subaxnimo, oo ka billowda geeska Santa Monica Boulevard iyo Crescent Heights Boulevard, oo u ordayaal dhowr ah oo galbeedka ku yaalla Santa Monica Boulevard ilaa geeska Robertson Boulevard.
Xaggee Laga Joogaa?
Raadinta hoteel inta lagu jiro kibirka?
Waxaa jira qolal badan oo la awoodi karo, qolal LGBTQ-u saaxiib ah si ay u doortaan.
Ramada Plaza Hotel waxeey ku taallaa talaabooyin laga helo dukaamo badan iyo dukaamo gay ah.
Heerka Heerka waxaa loo yaqaanaa dabeecadeeda iyo xaflad xafladeed, taas oo noqon doonta xitaa dad badan oo bulshada dhexdeeda ah inta lagu jiro Jaamacadda LA.
San Vicente Bungalows wuxuu ku wareegsan yahay geeska khaniisyada caanka ah, hase yeeshee hoteelka-cusub oo cusub oo cusbooneysiin ah oo cusbooneysiin ah iyo casriyeynta bedelka gudaha-wuxuu leeyahay dareen raaxo leh, barkad nabdoon oo dabaq ah.
Khayraadka Los Angeles
Waxaad ku xisaabtami kartaa xaqiiqda ah in badan oo khaniisiin ah, iyo sidoo kale maqaayado caan ah , hudheelada hudheelka ah , iyo dukaamo, waxay leeyihiin dhacdooyin gaar ah iyo xaflado dhan Toddobaadka Pride. Ka fiiri warqadaha jinsiga ee degaanka, sida Faahfaahinta LA iyo Lesbian News wixii faahfaahin ah. Sidoo kale fiiri bogga LGBTQ oo aad uxiiso oo ay soo saartay hay'adda dalxiiska ee rasmiga ah ee magaalada, West Hollywood CVB, iyo sidoo kale hagaha LA-LA-da ee la midka ah, oo ay abuureen Guddiga Dalxiiska iyo Golaha Los Angeles.
Waxaad ka heli doontaa macluumaad fara badan oo ku saabsan muuqaalka goobta ku yaala Guide ee West Hollywood Gay Guide .
Queen Mary Casho iyo Ghost Tour
Sidee loo daawadaa Hollywoodka ugu wanaagsan ee hal maalin ah
Masraxa Los Angeles
Bandhigyada Muusikada Los Angeles
Kusoo laabto Beverly Hills iyo West Hollywood
Istaraatijiyadaha Miisaaniyadda Miisaaniyadda ee Helitaanka Bedka Soodhaweynta Bilaashka ah
Waa maxay Calavera?
Noofambar waa bilawgii dhaxaltooyada Mareykanka
Duulimaad RV: Mount Mount National Park
Sida Loo Helo Xarunta Barclays, Brooklyn Nets Stadium
Ded Moroz, Ruushka Ruushka
Ma dhicin: Barnaamijyada Horyaalka London ee ugu Fiican iyo Barnaamijyada Jimicsiga
8 ee Matxafka Wanaagsan ee London
Maarso ee London: Hagaha Cimilada iyo Dhacdooyinka
Liiska Xaafadaha Deegaanka Brooklyn, NY
Makhaayadaha ugu waaweyn ee Walt Disney World iyo Epcot
Talooyin loogu talagalay dumarka u safraya Bariga Yurub
Mais Oui: Faransiiska St. Martin iyo Grand Beach Beach Club